के इन्टरनेटमा पनि ‘क्लिन फिड’को माग, सम्भब छ ?
गत पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतमले एउटा रिट दायर गरेका छन्, जसमा दुईवटा माग राखिएको छ । पहिलो- विदेशबाट नेपालमा बिना अनुमति प्रसारण भइरहेका श्रब्यदृश्य सामग्रीको प्रसारण बन्द गर्नुपर्छ । दोस्रो- विदेशी विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) सामग्री मात्रै प्रसारण गर्न दिनुपर्छ ।
Ncell को एक घण्टाअनलिमिटेड डाटा सेवा: कसरि किन्ने ?
Ncell को Always On डाटा प्याकेज: यसको बिसेषता तथा मूल्य
Ncell को ननस्टप YouTube अफर: कसरी किन्ने यो प्याकेज अनि कति पर्छ यसको शुल्क ?
वर्ल्डलिङ्क भायनेट सुबिसु ब्रोडलिङ्क वेबसर्फर डीसहोम नेपाल टेलिकम एनसेल क्लासिक टेक